Zhejiang Kaibo Valve Co., LTD zvigadzirwa zvikuru zvinosanganisira maAmerican neRussia akaenzana magedhi mavharuvhu, mavhavha epasi, mavhavha ekuongorora, mavharuvhu ebhora uye mamwe mavhavha mhando, isu tine anopfuura zana zvigadzirwa mitsara uye angangoita 1000 akasiyana mamodheru.
Nzira Valve Inogona Partner
Nemi Nhanho Dzese Nzira.
Zvigadzirwa zvepamusoro zvinosanganisira maAmerican neRussia akaenzana magedhi mavharuvhu, mavhavha epasi, mavhavha ekuongorora, mavharuvhu ebhora nemamwe marudzi emagetsi,
Chigadzirwa Kushandiswa Kuvhura ...
Yakakwira Pressure Flanged Gate Valve
Dhizaini uye Manufa ...
Magetsi Gedhi Valve
PN （MPa) dzimba Te ...
Globe Valve, Flanged Kupera
Dhizaini ASME B16.34 ...
Gate Valve, Flanged Kupera
Dhizaini API 600; API 603 ...
Zhejiang Kaibo Valve Co., Ltd. iri locater mune inozivikanwa "China vharafu guta" -Longwan dunhu reZhejiang province.Our kambani yanga iri kuita muvhavha chigadzirwa dhizaini uye kugadzirwa kwemakore mazhinji uye takaunganidza zvakapfuma ruzivo mumunda. yakatomisikidza mukurumbira wakanaka sevheji yekugadzira uye ine maitiro akanaka pamusika wevhavha.
Iko kushanda kwevhavha yekutarisa ndeyekuona kuti iyo yepakati iri mupayipi inotungamirwa kuyerera isina backflow
Tarisa vharuvhu, inozivikanwawo sevhavha yekutarisa, imwe yekuyerera vharuvhu, tarisa vharuvhu kana cheki vharuvhu, basa rayo nderekuona kuti iyo yepakati iri mupombi inotungamira kuyerera isina backflow. Kuvhura nekuvhara kwevhavha yekutarisa zvinoenderana nekuyerera kwesimba repakati kuvhura nekuvhara. Tarisa vharafu ndeye ...
Ndeapi masimbi-akavharirwa maglobhu evharuvhu akapatsanurwa kuita zvinoyerera chiteshi fomu?
Simbi-yakavharwa vharafu vharafu 1. Yakatwasuka kuburikidza nevhavha yegloves Iyo "yakatwasuka nepakati" muvhavha yakatwasuka-yepasi rose ndeyekuti magumo ayo ekubatanidza ari pane axis, asi chiteshi chayo chemvura hachina "kutwasuka kuburikidza", asi zvinotyisa. Kuyerera kunofanirwa kutendeuka 90 ° kuti ipfuure nepakati ...